हारगुहार गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि विद्यार्थीले अस्पतालमै रिले अनशन सुरु गरे
17 Nov 2019 | आइतबार, १ मंसिर, २०७६ | Edition : Nepal | UK | Australia
पोखरा । तोकिएभन्दा बढी पैसा लिएको भन्दै गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कक्षाकोठा र कलेज प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका विद्यार्थीले बढी पैसा फिर्ता माग्दै आन्दोलन गरेका हुन् ।
अघिल्लो सातादेखि आन्दोलित विद्यार्थीले कास्की प्रशासन र गण्डकी प्रदेशको सामाजीक विकास मन्त्रालयमा उजुरी गरेका थिए । प्रशासनले विद्यार्थी र कलेज व्यवस्थापन दुवै पक्षसँग वार्ता गरे पनि समस्या सुल्झिन सकेको छैन । प्रशासनसँग हारगुहार गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि विद्यार्थीले आइतबारदेखि गण्डकी शिक्षण अस्पतालमै रिले अनशन सुरु गरेका छन् ।
दुई सातादेखि आन्दोलन गर्दा पनि सुनुवाइ नहुँदा अनसन थाल्नुपरेको आन्दोलन विद्यार्थी प्रवीण गौतमले बताए । प्रशासनले वार्तामा बोलाउने तर सहमतिबिनै झुलाइरहने गरेको गौतमले बताए । सन् २०१६ देखियताको ब्याचका विद्यार्थीले कलेजबाट बढी शुल्क उठाइएको बताउँदै आन्दोलन गरिरहेका हुन् । उनीहरुले तोकिएभन्दा २ देखि ७ लाख रुपैयाँ शुल्क कलेजले बढि उठाएको बताउँदै आएका छन् ।
कलेज प्रशासनले भने सरकारबाट तोकेको शुल्क नै लिदै आएको दावी गरेको छ । मेडिकल कलेजहरुको शुल्क त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले तोकेको छ । संस्थानको डीनको कार्यालयले २०७२ असोज १ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार चिकित्साशास्त्र शिक्षा पढाउने कलेजको फी निर्धारण भएको जनाएको छ । उसले उपत्यकाबाहिरका कलेजलाई ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।
दोस्रो किस्ता स्वरुप २५ प्रतिशत तेस्रो वर्षमा र तेस्रो किस्ता २५ प्रतिशत चौथों वर्षमा बुझाउनुपर्ने नियम संस्थानले बनाएको छ। तर गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले त्यसभन्दा बढी फी तिर्नुपरेको भन्दै आन्दोलन गरेका हुन्। कलेजले भने पुरानो मितिमा तोकिएको फीअनुसार पढाउन नसकिने बताएको हो।
इतिहास सम्झेर फोटो खिचाउँछन् पर्यटक
गोरखा । विसं २०७२ को भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त गोरखा दरबार निर्माणकै क्रममा छ । सँगै रहेको गोरखकाली मन्दिरलाई भूकम्पले क्षति पु¥याए पनि सँगै जोडिएको दरबारको निर्माण भइरहेका कारण यसको निर्माण भने थालिए
अष्ट्रेलियामा दुई नेपाली पक्राउ
सिड्नी । अष्ट्रेलियाको सिड्नीबाट दुई नेपाली पक्राउ परेका छन् । भिसा थप्नको लागि इन्डोनेशियाको बालीमा एक साता बसेर सिड्नी फर्केका एक युवा र युवतीलाई त्यहाँको अध्यागमन विभागले पक्राउ गरेको हो ।
बुबाले जोडेको अर्बौँ सम्पत्ति किन जोगाउन सकेनन् अनिल अम्बानीले ?
एजेन्सी । भारतमा मात्र नभई पुरै विश्वमा चर्चित छन् दुई धनी दाजुभाई मुकेश धिरुभाइ अम्बानी र अनिल धिरुभाइ अम्बानी । यी दुई ठुला व्यापारीका पिता हुन् उद्योगपछि धिरुभाई अम्बानी । मुकेश अम्बानीको जन्म सन्
एजेन्सी । मानिसमा शारीरिक सम्बन्धको बारेमा विभिन्न धारण रहेको हुन्छ । कसैले यसलाई राम्रो रुपमा लिन्छन् भने कसैले यसलाई निजि र गोप्य रुपमा राख्न चाहान्छन् ।
सम्भोग गर्नुका यस्ता छन् विशेष पाँच फाइदा
दुई सन्तानकी भाउजु लिएर देवर भागे, बयान सुन्दा सबै चकित
ब्रेकफास्टमा यी खानेकुरा !
काठमाडौं । शरीरलाई स्वस्थ राख्न तथा फिटनेसमा ध्यान दिन खानेकुरामा पनि विशेष ध्यान पुर्यानुपर्छ । मानिसको स्वस्थ जीवनशैलीमा खानपानले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । बिहानको ब्रेकफास्टमा के–के खानेकुरा समावेश गर्ने भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
जाडोमा हात फुट्नबाट यसरी बचौँ
किसमीस सेवन गर्नुका फाइदाहरु
पानी चोरेको आरोपमा उजुरी !
एजेन्सी । मुम्बईस्थित आजादनगर प्रहरी चौकीमा पानी चोरेको आरापमा ६ जना बिरुद्ध उजुरी परेको छ । उनीहरुमा आरोप लागेको छ की, पछिल्लो ११ वर्षमा दुई इनार खनेर ७३ करोड भारु भूमिगत पानी चोरेका छन् ।
अत्यन्त लामो कोब्रा नालाभित्र भेटेपछि...
गँगटोले भरिएको टापु !
कक्षामा ढिला आउँदा विद्यार्थीलाई लाग्यो अनौठो जरिवाना